बाबुरामले ‘भारतलाई धोका दिन मिल्छ?’ भन्दा प्रचण्ड बोलेनन् - Nepal News - Latest News from Nepal
बाबुरामले ‘भारतलाई धोका दिन मिल्छ?’ भन्दा प्रचण्ड बोलेनन्
काठमाडौं, २५ मंसिर । सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका उपनेता टोपबहादुर रायमाझीले संविधान संशोधन विधेयक संसद्बाट पारित नहुने ठोकुवा गरेका छन् । आफ्नै दलका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकलाई जनताले अस्वीकार गरिसकेका कारण गणितीय रूपमा पनि पारित नहुने ठोकुवा रायमाझीले गरेका हुन् ।
‘सरकारले ल्याएको यो संविधान संशोधन त पास हुँदै हुँदैन । गणितीय रूपमा पनि हुँदैन, राजनीतिक रूपमा पनि जनताले अस्वीकार गरिसकेका छन्,’ नेपाल अध्ययन केन्द्रले शुक्रबार आयोजना गरेको बहसमा माओवादी संसदीय दलका उपनेता रायमाझीले भने, ‘यो संशोधन पास गराउने आँट प्रधानमन्त्रीसँगै छैन, फिर्ता लिने आँट पनि छैन ।’ रायमाझीले संशोधन विधेयकलाई मुल्तबीमा राखेर चुनावमा जाने विकल्प रोज्न प्रधानमन्त्री लाहाललाई सुझावसमेत दिए । ‘विकल्प भनेको यस (संविधान संशोधन विधेयक) लाई मुल्तबीमा राखौं वा कोमामा राखौं अनि चुनावमा जाऔं,’ उपनेता रायमाझीले भने । उनले मागे जति समूहको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन हुन नसक्ने अडानसमेत राखे ।
‘जसले माग्यो, त्यसले संविधान संशोधन गराउने हो भने भोलि कमल थापाले हिन्दु राज्य माग्छन्, अरूले अरू माग राख्छन्, कतिका लागि संशोधन गर्ने ?’ रायमाझीले भने, ‘म त संघीयताको कट्टर पक्षपाती मान्छे, तर अब संघीयता हामीले बुझाउनै नसक्ने गरी विकृत भइसक्यो । समस्या यहीँनेर छ ।’
माओवादी नेता रायमाझीले सरकारले संविधान संशोधनको ढुंगा फालेर जनता भड्काएको आरोपसमेत लगाए । ‘संविधान कार्यान्वयन अहिलेको मुख्य विषय हो तर त्यतातिर ध्यान नदिएर संविधान संशोधन बेमौसमको बाजा भयो । चुनाव गराउँदा संविधान कार्यान्वयन हुने हो । तर, विषयलाई अन्यत्र लगिँदै छ,’ उनले भने । उनले भारतकै कारण सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको तथ्यसमेत खोले । रायमाझीका अनुसार संविधान जारी भएपछि भारतले मान्दैन, त्यसैले हामी पनि मान्नुहुन्न भन्दै स्थायी कमिटीमै लामो बहस भएको थियो ।
‘संविधान जारी भएलगत्तै स्थायी कमिटी बैठकमा बाबुरामजी (डा. बाबुराम भट्टराई) ले भन्नुभयो, संविधान त जारी भयो, तर यो कुनै पनि हालतमा लागू हुँदैन । मधेसमा आन्दोलन हुन्छ, भारतले त्यसलाई सघाउँछ । हाम्रा नेताहरूले आत्मसमर्पण गरिहाल्छन् । त्यसैले आजै विज्ञप्ति जारी गरेर मधेस आन्दोलनलाई सघाउने भनौं । भोलि हामीलाई त्यताबाट फाइदा हुन्छ,’ रायमाझीले भने, ‘बाबुरामजीले त्यसो भनिरहँदा प्रचण्ड (प्रधानमन्त्री) चुप लाग्नुभयो । बाबुरामजीले अझ कुरा खोलेर भन्नुभयो, ‘हिजो १२ बुँदे सम्झौतादेखि भारतको सहयोग बिर्सने ? भारतलाई धोका दिन मिल्छ ? तर पनि प्रचण्डले कुनै जवाफ दिनुभएन ।’ भट्टराईले यति गम्भीर कुरा गर्दासमेत दाहाल नबोलेपछि आफूले बैठकमा प्रतिवाद गरेको घटनासमेत रायमाझीले सुनाए ।
‘यति गम्भीर कुरामा पनि प्रचण्ड नबोलेपछि मैले तुरुन्तै प्रश्न गरें, ‘त्यसो भए तपाई संवैधानिक संवाद समितिको अध्यक्षले संविधानमा उनीहरूका एजेन्डा किन हाल्नुभएन ? हामीले भारतले गुन लाएको भनेर ब्याज तिर्नुपर्ने ? कसैको दास बनिरहनुपर्ने ?’ रायमाझीले भने । उनका अनुसार बाबुरामको प्रश्नको जवाफ दाहालले नदिएपछि उनी बैठक नै छाडेर हिँडेका थिए । ‘बाबुरामको प्रश्नको जवाफ प्रचण्डले दिनुभएन, बाबुरामजी त्यसपछि झोला बोकेर हिँड्नुभयो,’ रायमाझीले भने, ‘आजभोलि कहिले चाइना कार्ड प्रयोग गर्न १२ बुँदे सम्झौता भारतमा गर्नु गल्ती भयो भन्नुहुन्छ ।
आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ।
कोरियामा महाअभियोग पारित नभए विपक्षी दलका सांसदले राजीनामा दिने
आज ६८ औं मानवअधिकार दिवस